Sida ugu fudud ee uu qofku ku xakameyn karo xanaaqiisa ama Carada haysa”Warbixin Cilmiyeesan” - iftineducation.com
iftineducation.com – Xanaaqa ama Carada waxaa lagu qeexi karaa, in uu yahay Hab-dhaqan ku dhisan dabeecad khallafsan oo aan wanaagsaneyn, kaasoo ka dhasha fal-celin uu qofku ka sameeyo dhacdo ama hadal ama xitaa fikrado aan wanaagsaneyn oo uu ruuxu la kalmo mararka qaar oo madaxiisana ku wareega.
Qaraxa volcanaha carada, ama xanaaqa waxaa ka dhasha natiijo ah daciifnimo ku timaada awooda hal-abuunimo bulsheed, hoos u dhac kartida xalineed ee mashaakilaadka, iyo arrimo kale oo dhinaca biology-ga la xiriira.
Wey tira badan yihiin waxyaabaha uu xanaaqu ka dhasho, laakiin sababta ugu weyni waa habdhaqanka qaldan ee bani’aadamka, iyo mowqifyada qaar ee iska-caabinta ku dhisan ayadoon arrinta loo daraasadeyn si caqli ku dhisan, wuxuu xanaaqu sii xoogeystaa marka uu qofku sawirto in xuquuq uu lahaa lagu xadgudbay, ama ujeedooyinkiisii uu qof isku dayay in uu ka carqaladeeyo.
Waxaa kaloo jiro sababo kale oo carada qofka ku beera, sida waxyaabo uu qofku diidan yahay iyo arrimo uu qofku ku dhex jirkooda uu u arko wax ciriiri ku ah, isla markaana ay cid kale ku qasbeyso, ama kula kaceyso.
Waxaan la dhayalsan Karin xanuunada dhinaca jirka iyo dareenka raaxo (nasiino) la’aanta ku dhisan ee ka dhasha xanaaqa qofka ay caradu hareysay, qofka careysani waxa uu awoodi weynayaa in uu xakameeyo dhaq-dhaqaaqiisa, falalka uu ku kacayo, iyo go’aanada khallafsan ee ka soo fulaya, waxaa hoos u dhacaya ama uu qofku weynayaa awoodii saamaxaada iyo cafinta dadka uu u carooday.
Waxaa la xusaa in dadka howlaha cul-culs haya ay yihiin dadka ugu carada badan, sida Dhaqaatiirta iyo Kalkaaliyayaasha qabta howsha la tacaalidda bukaanada qaba xanuunada daran iyo Darawalada waqti badan gawaarida ku kaxeeya wadooyinka ciriiriga daran.
Sidoo kale dadka inta badan ku hadla cod-baahiyayaasha (Microphones), iyo kuwa inta badan qeyliya waxaa lagu sheegay in ay ka mid yihiin dadka ugu xanaaqa dhow bulshada.
Marka uu qofku caroodo waxaa lunta isku dheela-tirnaantii qofnimo, waxaa kordha garaaca wadnaha, waxaa is-daba-joog noqda neefsashada qofka, wuxu dareemaa heerkul weyn oo gudhaha jirka ah, wejiga ayaa gaduuta, wuxuu dareemaa oo kale in dhiigiisa uu ku ururayo madaxa, iyo ayadoo araga qofka xanaaqsan uu humaag ka galo.
Waxaa mararka qaar dhacda, in qofka xanaaqsan wuxuu dareemaa calool majiir, iyo qoorta oo xanuunta, dadka inta badan marka ay caroodaan waxay dareemaan tamar weyn oo gudaha jirka ku keydsan, waxayna mararka qaar u muuqdaan kuwo awood dheeraad ah ilbiriqsiyo gudahood ku heley.
Iska xakameynta xanaaqa:
Arrinta lagama maarmaanka ah waa in la garto, oo si fiicanna loo eego, waxa inta badan dadka ku xambaara in ay caroodaan…bal isweydii “Waa maxay waxa adiga inta badan kaa xanaajiya”?
Marka uu ruuxu jawaab u helo su’aashaasi ayuu awoodi karaa in uu ka fogaado talaabooyinka qaar ee uu ku dhaqaaqi lahaa iyo in uu mushkiladda u xaliyo hab aan mar kale dhibaatadu dib ugu soo laabaneyn, wey dhici kartaa in talaabooyinkaasi lagu guuleysto ama lagu guuldareyso, laakiin isku deyga ayaa muhim ah.
Waxaa aad loogu baahan yahay, in laysku dayo koontaroolidda dareenka xamaasadda ku dhisan iyo waxyaabaha kicin kara, gaar ahaan mowqifyada uu qofku ogyahay in ay ku soo noq-noqdaan, iyo meelaha aysan sax aheyn in uu qofku kula fal-galo dareen iyo shucuur kacsanaan ah, sida: marka la joogo xafladaha iyo munabadaha rasmiga ah, kulamada shaqada looga hadlayo ee ay joogaan madaxda, iyo kulamada go’aanada looga tashanayo ee dhexmara waalidiinta iyo caruurtooda, ama macalimiinta iyo ardeydooda.
Dadka aadka u xanaaqa dhow, ayaa lumiyo kalsoonida dadka ugu yaraan hal qof todobaadkiiba, sida lagu xusay warbixintan.
Waxaa aad u muhiimsan marka xaaladahaasi oo kale la taagan yahay in aan kontaroolka la lumin si aan qofku u waayin dadka ay aheyd in uu ilaaliyo ixtiraamkooda oo aanu u wiiqin xiriirkii kala dhaxeeyey.
Si uu qofku uga taqaluso (u baabi’iyo) xanaaqiisa waxaa aad u wanaagsan in uu qofku ugu yaraan cabo hal galaas oo biyo ah, uu weyso qooto, iyo hadduu taagan yahay uu fariisto, ama meel xasiloon seexdo, sidoo kale waxaa aad u fiican in uu jimicsi sameeyo, uu ordo ama rucleeyo, ama in uu barkinta feer ku garaaco si uu u lumiyo tamarta (energy-ga) markaasi ka buuxa, waxaa kaloo aad loo jecleysanayaa, in uu qofku iska cafiyo cida uu falkooda ama ereyadooda ka xanaaqay, isla markaana uu wixii dhacay oo dhanba u arko wax dhici karay.